Wasaaradda Gaashaan-dhigga Oo Soo Bandhigtay Horusocodka Tababarrada Ciidanka Qaranka | Marsa News
Wasaaradda Gaashaan-dhigga Oo Soo Bandhigtay Horusocodka Tababarrada Ciidanka Qaranka
November 10, 2019 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Wasiirka Wasaaradda Gashaandhiga Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye ayaa ka warbixiyey Guulaha kala duwan ee ay gaadheen ciidammada Qaranka Somaliland, mudadii uu xilka hayey, gaar ahaana guulaha ay ka soo hooyeen dhinacyada waxbarashada iyo tababaradda.
Wasiirka oo maanta u warramaayey warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in ay ciidammadu goor walba heegan u yihiin difaaca dalka iyo u jilib dhiga cadawga kala duwan ee dalka, isaga oo tilmaamay in ay Ciidammada Qaranka Somaliland guulo aan la ilaawi karin ka soo hooyeen waxbarashadii ay ku soo qaateen dalka dibadiisa.
Waxa kale oo uu Wasiirka Gaashaan-dhigu sheegay in ay saraakiisha Ciidammada Qaranka Somaliland waxbarashooyin kala duwan ku qaateen dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba, taas oo ay dalkooda ugu difaaci karaan hab kasta.
Dhinac kale, Hoggaanka tababarrada ee ciidanka Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Sareeya Guuto Axmed Cali Maxamed Tansaani ayaa ka hadlay heerarkii uu maray tabobarka ciidammada Qaranku, halka uu maanta taagan yahay, hiigsiga iyo himilada Tababarrada Ciidanka.
Hoggaanka Tababarku wuxuu sheegay in ay ciidammada Qaranku helaan tababarro kala duwan , kuwaas oo ay ku qaataan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba, waxaanu tilmaamay in lagu soo tababaro ciidamada dhinaca Farsamada Gacanta, Injineernimada, Dhakhaatiirta iyo saraakiisha ciidamada, kuwaas oo qaatay shahaadooyinka derejada koowaad ee Jaamacaddaha (Degree-ga ) iyo shahaadada derejada labaad ee Jaamacadda oo ah Master Degree.